Mushure mekuita izvi svondo rapera, muporofita uyu anonzi akabva angotsakatika.Mapurisa ekudunhu reManicaland anotsinhira nezvekufa kwevanhu vaviri avo vanonzi vakabaiwa majekiseni 32 kamwe chete pahuviri hwavo, ndokutemwa mazinyora akavasiya vongojuja ropa — vose ndokufa vachipupa furo nemumhuno nemukanwa.Vashakabvu vanonzi vainge vanotsvaga kubatsirwa kumuporofita ari kunzi kuBuhera ainge ashanyira amai vake uyu.
Peneil Zvinowanda (69) naEllen Marime (57) vanonzi vose vakafa vachangobva kubaiwa majekiseni nemuporofita uyu musi wa24 na25 Zvita mubhuku raMukutukutu, kuBuhera.Mutauriri wemapurisa eZimbabwe Republic Police kudunhu reManicaland, Inspector Tavhiringwa Kakohwa, vanoti matikitivha ari kutsvaga Kudakwashe Ziwange (33) – uyo ari kupomerwa kukonzeresa rufu rwevaviri ava.
Veruzhinji vangava neruzivo rwekwaari vanokurudzirwa kuzivisa mapurisa ari pedyo navo.Ziwange akapedzisira kuonekwa panhamba 74 Tsoka, Rimuka, kuKadoma.
Vanoti Zvinowanda ndiye akatanga kuenda kumuporofita uyu achida kubatsirwa mushure mekutambudzwa nemusana nemakumbo kwemakore anosvika 20.Zvinowanda anonzi akabva abaiwa majekiseni 17 ane mishonga yechivanhu isati yazivikanwa kuti yakamira sei, achibva angobva panzvimbo apa otorwara zvakanyanya.“Mukoma wemufi, Tawanda Nyamanjo (51) akamuona akarara padivi pemugwagwa achibva aenda naye kumba kunova kwaakasvika achifa,” vanodaro mapurisa.Mutumbi wake unonzi wakanga uine maronda mumabvi, magokora nekumusana uye waibuda ropa nemukanwa nemumhuno.Mutumbi uyu wakazoendeswa kumochari yeMurambinda Mission Hospital kunovhenekwa.
Nomusi wa25 Zvita, Ziwange anonzi akashanyirwa naMarime uyo aida kurapwa makumbo ake aimutambudzwa kwemakore mashanu.Marime akaperekedzwa nemuzukuru wake, Mauto Nyikadzino (57).
Anonzi akabaiwa majekiseni 15 aiva nemishonga yechivanhu nemuporofita mumwe chete uyu.Hurwere hwake hwakabva kwakomba achibva ashaya achangosvika pamba.Mutumbi wake wakaendeswazve kumochari yeMurambinda Mission Hospital kunovhenekwa uye wakaonekwa wakachekwa-chekwa nereza paibvi rekuruboshwe.Waibudawo ropa nemumhuno nemukanwa.
Nyaya mbiri idzi dzakamhan’arwa kumapurisa zvikaita kuti Ziwange atsakatike munzvimbo iyi.Mukati memasvondo maviri adarika, vanhu 4 vafa mushure mekunge vapihwa miteuro nemaporofita akasiyana.